Google Chrome 4.0.221.6 Dev — MYSTERY ZILLION
technology to make the web faster, safer, and easier. It has one box for everything: Type in the address bar and get suggestions for both search and web pages. Will give you thumbnails of your top sites; Access your favorite pages instantly with lightning speed from any new tab.
вЂў Sandboxing. Every tab in Chrome is sandboxed, so thatatab can display contents ofaweb page and accept user input, but it will not be able to read the user's desktop or personal files.
Google announcesaso-called incognito mode claiming that it "lets you browse the web in complete privacy because it doesnвЂ™t record any of your activity". No features of this, and no implications of the default mode with respect to Google's database are given.
вЂў Rendering Engine
English ကို တိုက်ရိုက် copy - paste လုပ်တာမျိုးမလုပ်ပဲ ... မြန်မာလိုပြန်ပြီးမှ ရေးပေးစေချင်ပါတယ် Bro. တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဆိုကိစ္စမရှိပေမဲ့ .... အများကြီးဆိုရင်တော့ ... ဘယ်သူမှဖတ်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။
share ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်လို ့မရဘူးလေ
ဗျာ ဘယ်သူမှမဖတ်လဲ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပဲတင်မယ်အကို ဒါဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်
တို ့က IT သမားတွေပါ ဘယ်ဆော့ဖ်၀ဲလ်မှ မြန်မာလိုမရှိပါ ဒီလိုပဲလိုက်ဖတ်ရတာပါပဲ စာဖတ်တဲ ့လူနဲ ့
မဖတ်တဲ့လူကွာတယ်ဆိုတာ ဒါပါပဲ ကျွန်တော်လဲ အကိုတို ့ဖိုရမ်ကို လေးစားလို ့မြတ်နိုးလို ့ပေါ့ဗျာ
အဲ့တာကြောင့်သာ share ပေးတာပါ ကျွန်တော်ဆိုရင် အခု စာမေးပွဲနီးနေပါပြီ 27 ရက်နေ့ဆိုဖြေရတော့မယ်ဗျာ ကျွန်တော့မှာလဲ စာကျက်စရာရှိတယ် အလုပ်တွေရှိတယ် ဗျာ
ပြောရရင်မအားပါ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခွန်းပြောလိုက်မယ် အဲ့ဒီလိုစာမဖတ်ကြရင်တော့
ကျွန်တော်ကြုံဖူးတဲ့လူုတွေလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် Mpt ကနေ poxy ပြောင်းလိုက်ကြောင်းစာလာတာ
ကို မဖတ်ပဲနဲ ့ကော်နက်ရှင်ကျနေတယ်ပြောသလို ပေါ့ဗျာ တကယ်တမ်းသူတို ့က စာမဖတ်တတ်တာ
မဟုတ်ပါ မဖတ်ကြလို ့ပါ သူတို ့ကလဲ ဘွဲ ့ရပညာတတ်တွေပါ အကောင်းဆုံးက
အင်္ဂလိပ်စာ ကိုမကြောက်ကြပါနဲ ့ဖတ်ကြပါ ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတတ်လို ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်ဆိုရင်လဲ မသိတဲ ့စာလုံးတွေဆိုရင် ကျွန်တော်ဆရာတွေကိုမေးတာပါပဲ အဲ့လိုသာမဖတ်ကြ
ဘူးဆိုရင်လဲ သဘောပါပဲ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ကိုRlay ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အပေါ်ကအကိုပြောချင်တာက ဒိုက်ရိုက်မကူးချပါနဲ့လို့ပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျ။
သူများSite ကဟာကို ဖော်ပြချင်ရင်တော့ မူရင်းSite လေးကိုညွှန်းပေးပါခင်ဗျာ။
မင်မင်၊မော်မော် တို့ Style နဲ့ ဖြီးကြည့်တာပါ .........စိတ်တော့မရှိနဲ့နော် :P
share ပေးတဲ့အခါမှာ ... တိုက်ရိုက်ကြီး copy paste လုပ်တာက ... ကြာရင် ဖိုရမ်မှာ Thread တွေပွသွားနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့် ပြောရတာပါ။
Bro ယူထားတာ ဒီ Site ကပါ။
အစ အဆုံး ဒီတိုင်း copy paste ထားတာပါ။
ဒီလိုသာ online မှာရှိသမျှကို copy paste နေရင် ဒီဖိုရမ်လဲ 100000 GB နဲ့ ဆံ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်သာပြောရတာပါ။
မအားတဲ့ကြားက share လုပ်ပေးတဲ့ စေတနာကိုတော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
English လိုဖတ်မှရမယ်ဆိုတာ ... မှန်တာပေါ့။ သို့သော် ... ကျနော်တို့ရည်ရွယ်တာက အားလုံးအတွက်ပါ။ English Expert တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တန်း မြန်မာလိုရေးတာနဲ့ English လိုရေးတာ ..... ( ဒီဖိုရမ်မှာ ) ..... မြန်မာလိုရေးတာကိုပဲ ပိုဖတ်ကြပါတယ်။
ကျနော် အဓိကပြောချင်တာကတော့ ...... တိုက်ရိုက် copy paste တွေမလုပ်ကြဖို့ပါပဲ။
ကျနော် ပြောရတာလဲ အရမ်းအားနာပါတယ်။
( Istein လဲဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်ပဲ ဖိုရမ်ကထွက်သွားတာကြောင့် ကျနော်အဲလိုလဲမဖြစ်စေချင်ပါ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် contribution အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်က ရှယ်တာပါ ကျွန်တော်ကလဲ အခုမှဆရာတစ်ယောက်နဲ ့လှုပ်ရှားနေတုံးရှိပါသေးတယ် နောက် အကိုပြောတဲ့ဆိုဒ်ကိုလဲ ကျွန်တော်အခုမှ သိတာပါ ဒီစာတွေ
ကိုကျွန်တော်ရေးတာလို ့လဲမပြောပါ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ ့စာတွေ ကို ပြန်ရှယ်ပေးတာပါ
အဲ့တာကို မှမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘာ နောက်ထပ်ဘာဆောဖ့်၀ဲလ်မှ
မတင်တော့ပါဘူး ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတော့ပြောလိုက်မယ် အလွယ်မကြိုက်ကြပါနဲ ့
အလွယ်ကြိုက်လို ့ကတော့ သူများဦးနှောက်သာဖောက်စားတာပဲ၇ှိမယ်ဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမယ်
မဟုတ်ပါ ကျွန်တော်တု ိ့လဲ ဒီလိုပဲရှာပြီးတော့ တင်ရတာပါ ဘာရယ်မဟုတ်ပါ အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့
အကိုတို ့ထင်နေတာက ကျွန်တော်က level တိုးချင်လို ့တင်နေတယ်လို ့ထင်နေတာလားမသိဘူး
ကျွန်တော်အဲ့ဒီ level နဲ ့လည်းဘာမှဖြစ်မသွားပါ နောက်ကျွန်တော့ကိုဘယ်သူကမှအထင်မကြီးသွား
ပါ ဒီဖိုရမ်ထဲမှာ၀င်မရေးပဲနဲ ့နေတဲ ့လူတွေလည်းရှိပါတယ် သူတို ့ကလည်း တကယ်တော်တဲလူတွေပါ
သူတို ့၀င်ရေးမယ်ဆိုလဲ သူတို ့အဆင့်က တကယ့်ဆရာအဆင့်ရှိတဲ ့လူတွေပါပဲ မရေးကြတာပါ
အဲ့ဒီလိုမရေးကြလို ့လဲ သုူတို ့ဘာမှဖြစ်မသွားပါ ကျွန်တော်ပြောတာလွန်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်
ဆောဖ့်၀ဲလ်တွေကိုတော့ဘယ်ကရလို့လို မပြောချင်ပါ ကိုယ်ဘာသာရှာကြပါ ရှာတတ်ရင်လည်း
ပြီးတာပါပဲ မရှာတတ်တဲ့ လူတွေအတွက်သာပေးတာပါ ကျွန်တော်ကတော့ ဆောဖ့်၀ဲလ်ဆိုရင်တော့
ဒါဘယ်ကရတာပါလို ့မပြောချင်ပါ ဘာလို ့လဲဆိုတော့ အလွယ်တကူတွေများနေလို ့ပါ ဥပမာ
service ပိုင်းသာ ဒါဘယ်ကပြောတာဘာညာပြောနိုင်မယ် ဆောဖ့်၀ဲလ်ကတော့ဘယ်တော့မှမပြော
နိုင်ပါ ဘယ်သူမှအလွယ်တကူဆိုဒ်တွေမတွေ ့ပါ ဒီလိုပဲရှာရတာပါ ကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်
အားလုံး၀မ်းသာကြပါ ဒါကိုလဲပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို ့အိုင်စတိုင်းလုပ်သလို လိုက်လုပ်တယ်လို ့
ထင်ကြပါအုံးမှာပါ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဖြစ်မသွားပါဘူး ကိုယ့်လမ်းကိုလျှောက်မှာပဲ အားလုံး၀မ်းသာနိုင်ကြပါစေ
ဒါကျနော့်ရဲ့ Moderator အဖြစ်နဲ့ ပထမဆုံးကြုံရတဲ့ Misunderstanding ပေါ့ဗျာ။
ကျနော် ဖြစ်သင့်တာကိုပဲပြောပြတာပါဗျာ။ ဒီလိုပြောဖို့လဲ ကျနော့်မှာတာ၀န်ရှိနေပြီလေ။
ကျနော်ပြောချင်တာက .... စိတ်မကောင်းပါဘူး။
Puja often found like this sentence...
"There are some user who are master in IT...But they never discuss in this forum....."
I would like to ask them..... " Why? "
There is one sentence is "NO ONE IS MASTER IN Technology....."
However Puja is welcome to share the zillion of knowledge...whatever you share about your knowledge.....It is good...
PS: Puja is not expect in writing Myanmar Language...so that I use English..
I hope we can share our view by freedom!...